4-kun oo muhaajiriin ah oo la badbadiyay - BBC News Somali
4-kun oo muhaajiriin ah oo la badbadiyay
18 Febraayo 2015
Ururka caalamiga Muhaajiriinta (IOM) ayaa sheegaya in afar kun oo soo-galooti ah la badbaadiyay shantii maalmood ee la soo dhafay iyagoo isku dayaya in waqooyiga Afrika kaga soo gudbaan badda Mediterranean.
Madaxa heyadda, IOM, ayaa amaanay ilaalada xeebaha Talyaaniga iyo ciidamada badda.
Baadari Francis ayaa sheegay inay badbaadiyeen dad ku jiray xaalad xun.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa sheegay in tirada soo-galootiga ee yimid Talyaaniga lixdii todobaad ee ugu horeeyay sanadkan ay korortay lixdan boqolkiiba marka la barbardhigo isla waqtigaas sanadkii tagay.
Badi soo-galootiga ayaa ka yimid dalalka ka hooseeya Saxaraha, waxayna ku jeedaan Yurub iyagoo usoo maray Libya.